भूइँचालो-उत्सवपछिको भूइँचालो | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार भूइँचालो-उत्सवपछिको भूइँचालो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समारोहको आयोजना गर्दै निकै उत्साहका साथ भूइँचालोको वाषिर्कोत्सव मनायो । विनास भएको दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सरकारको नैतिक र वौध्दिक आधार के थियो ? प्रश्न कसैले सोधेन । कसैले यस्तो प्रश्न सोधेकै भए पनि सरकारसँग यसको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण थिएन । भूइँचालो गएको एकवर्षपछि सरकारले भूइर्ँचालोले बिनास गरेका वस्तीहरुमा सर्वेक्षणका लागि इन्जिनियरहरु दौडाएको छ । दुई लाख रुपैयाँको लागतमा भूइँचालो प्रतिरोधी घर बनाउने शीप सिकाउन तालिमे इन्जिनियरहरुलाई खटाएको छ । सरकार प्रमुख ओलीले असारभित्रै सबै घरमा छानो हाल्ने प्रतिवध्दता व्यक्त गरेका छन् ।
रेडियोबाट सुन्नका लागि, आँखा कत्ति पनि नझिम्क्याई टेलिभिजनमा हेर्नका लागि र समाचारपत्रमा पढ्नका लागि यो अत्यन्त रोचक समाचार हो । यो समाचारको सकारात्मक पक्षका विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालिसकेका छन् । एकपटक यसको “ट्रेण्ड” बसेपछि यसले भेलको रुप लिने कुरामा कसैले कुनै शंका व्यक्त नगरेकै ठीक हुनेछ । तर, यो समाचारको अर्को पाटो अलिकति विभत्स पनि हुन सक्दछ । पोहोर साल भूइँचालोले तहस-नहस पारेका, यो वर्ष लामो खडेरीले खँगारिएका र सकी नसकी जीवन धानिरहेका गाउँका जनताले यो समाचारलाई कुन रुपमा लिने छन् ? उनीहरुको दिल र दिमागमा सरकारले निरन्तर प्रवाहित गरिरहेका यस्ता बतासे शैलीका “सुसमाचार”हरुले कस्तो असर पार्ला ?
के उनीहरुले असार महिनाभित्रै प्रत्येक भूइँचालो पीडितको घरमा छानो हालिदिने सरकार प्रमुखको कुरामा विश्वास गर्लान् ? के यति धेरै भत्किएका घरहरुको पुनर्निर्माण लगभग ४५ दिनको समयमा पूरा हुनु सम्भव होला ?
निश्चय पनि, सामान्य पढेलेखेका जनताले यो कुरालाई सरकार प्रमुुखको ठट्टाका रुपमा लिनेछन् । समाचारको दुनियाँमा रमाउने अधिकांश नेपाली जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठट्यौलो स्वभावसँग परिचित भै सकेका छन् । अरु केही नभए, रिपोर्टर्स क्लवका ऋषि धमला र प्रधानमन्त्री ओलीवीचको पटक-पटकको अन्तर्वार्ता र हास्यकार मनोज गजुरेलको कटाक्षले प्रधानमन्त्रीको ठट्टापि्रय स्वभावलाई लोकपि्रय गराइसकेका छन् ।
यसै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले भूइँचालो पीडित जनताका लागि आफ्नो सरकारलाई परिचालित गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूइँचालो पीडितका लागि राहत सहयोगको प्रभावकारी संयोजन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण हुनु पहिले नै सरकारको नेतृत्व लिन कम्मर कसेका प्रधानमन्त्री ओली त्यही एउटा र महत्वपूर्ण कार्यमा आफनो प्रभावकारिता सावित गर्न चुकेका छन् । यतिबेला राष्ट्रिय पुननिर्माण कार्यक्रम स्वयंमा सरकारी मजाक बनेको छ ।
भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रमा जुन सुस्त गतिमा काम भै रहेको छ त्यो दुनियाँको नजरबाट लुकेको छैन । पुननिर्माणमा जुन योजनावध्द एकाग्रताको आवश्यकता हुन्छ, भूइँचालो पीडित क्षेत्रमा त्यो कतै देखिँदैन । अधिकांश भूइँचालो पीडित क्षेत्रमा एउटा गाउँ र अर्को गाउँ वीचको भौगोलिक दूरीले नै पुननिर्माणलाई असहज वनाइदिन्छ ।
दुईसाताअघि भूइँचालोवाट अति-प्रभावित गाउँ र वस्तीमा पुग्दा त्यहाँ पुननिर्माणका कुनै समाचार थिएनन् । भूइँचालो पीडितहरुको बिलौना र आँशु नै समाचारका मुख्य विषय बनेका थिए । चाहे काभ्रे होस् अथवा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक होस् वा रामेछाप, गोरखा र लमजुङका सीमानामा रहेका बेंसी हुन् वा लेक, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटका खोंच हुन् अथवा टार-राजधानी उपत्यकाका सहायक स्रोतका रुपमा रहेका यी जिल्लाहरुमा भूइँचालोको कथा एउटै थियो ।
ती जिल्लाका कुनै पनि पीडितले सुख, शान्ति र वैभवको कामना गरेका थिएनन् । उनीहरु एउटा घर र छानोको खोजीमा थिए । “सरकारले घर बनाउन ऋृण अनुदान दिने आश्वासन नदिएको भए हामी आफ्नै हिसाबले आफनो व्यवहार गर्ने थियौं । केही नभएको अवस्थामा पनि ऋृण काढेर हामी तीन चार वर्षमा एउटा घर त वनाउने नै थियौं । तर, सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा देखाएर हामीलाई लोभ्यायो । घर बनाउन अनुदान र ऋण दिन्छौ भनेर हामीलाई पर्खायो । अहिले सरकारले दिएका ती आश्वासन हाम्रलागि निल्नु न ओकल्नु भएका छन्”, नुवाकोटका किसान शरण नेपालको अभिव्यक्ति यस्तै थियो ।
उता, नुवाकोटको छिमेकमा रहेको धादिङ जिल्लाको अवस्था झनै विद्रूप थियो । धादिङको उत्तरी भेगको वोरांग र अन्य गाउँबाट ज्यान जोगाउन सदरमुकाम आएका जनता अल्छीडाँडा शिविरमा थन्किएका थिए । यो एउटा शिविरमा मात्रै ४२० परिवार वसेका थिए । ती मध्ये ७८ परिवार गाउँ फर्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
धादिङ झार्लाङका ७५ वर्षीय स्याङरोङ तामाङ भूइँचालोपछि सुकुमवासी बनेका छन् । नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्न र वोल्न नसक्ने उनकोे भविष्य त लगभग अन्त्यमा नै छ । तर, उनका नाति-नातिनीको भविष्य पनि धरापमा परेको छ । ४५ वषर्ीय सुब्दार तामाङ भूइँचालोले घर भत्काएपछि पोहोर जेठदेखि यतै छन् । गाउँमा घर भत्किएको छ । खेतवारीमा काम गरीखाने अवस्था छैन ।”भूइँचालो पीडित यी शरणार्थीहरु आफ्नो गाउँ फर्किन गाह्रो छ” कांग्रेसका नवराज तिमिल्सिना भन्छन् ।
शिविरमा बस्नेहरुका लागि खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था जसोतसो भएको छ । शिविरमा बस्ने अधिकांश पीडित वौध्द धर्मबाट विदा लिएर प्रभु येशुको शरणमा पुगेको बताउँछन् जानिफकारहरु । मिशनरीहरुले पीडितहरुको उध्दारमा राम्रै काम गरेका छन् र उनीहरुको प्रभाव पनि निकै बाक्लो छ । स्थानीय प्रशासनले सबैलाई जथाभावी रासन बाँड्ने अनुमति दिएको छैन ।
जहाँ राहत छैन, त्यहाँ केही नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर, राहत पुगेको मार्पाकजस्तो गाउँमा पनि केही नहुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । मार्पाकमा जनताका १००३ धूरी घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् । पुननिर्माणका लागि दिइने दुईलाख रुपियाँमध्येबाट ५० हजार दिने प्रक्रिया शुरु भए पनि सेवा दिने कार्य सुचारु हुन सकेको छैन । मार्पाकमा जिल्ला दैवी प्रकोपको डेस्क पनि छैन । पुनर्निर्माण आयोगले खटाएका एकजना कर्मचारीले त्यति ठूलो संख्यामा रहेका पीडितहरुलाई सेवा दिनु त सम्भव नै छैन ।
धादिङका जनता र स्थानीय तहका पार्टी नेताहरु भ्रमित भएका छन् । पुनर्निर्माणको सरकारी मोडेल के हो ? कसैले बुझेका छैनन् । यही भ्रमको वीचमा री गाउँका जनताले आफनो घर आफैं बनाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म सरकारी मोडल यस्तो हो भनी कसैले बुझाउने प्रयत्न पनि गरेको छैन ।
धादिङ कांग्रेसका नेताहरु पीडितको तथ्यांक नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । जिल्लामा भूइँचालोमा परेर मर्नेहरुको संख्या ६८१ थियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका स्थानीय नेताहरु पनि सरकारको सुस्तगतिबाट आजित भएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष भूमि त्रिपाठी भन्छन, पुननिर्माणकोे काम असाध्यै ढीला भयो । हामीले पीडितका लागि एउटा घर पनि बनाउन सकेनौं । घर बनाउन जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको अनुदान होइन, अनुमति मात्रै चाहियो भन्दा पनि अनुमति पाइएन । जाडोका लागि न्यानो कपडा माघको अन्त्यमा वाँडियो । त्यो पनि, सवभन्दा क्षतिग्रस्त कुम्पुर गाउँका वासिन्दाले पाएनन । यो राहतमा पनि प्रशासनले भेदभाव गर्‍यो र माओवादी साथीहरुले त्यही भेदभावको पक्ष लिए । भूइँचालोको राहत र पुननिर्माणमा राजनीति हुनु राम्रो होइन । तर, भयो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष रामवहादुर भण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनको विचारमा जिल्ला प्रशासकलाई बढी अधिकार दिइएको कारणले गैरसरकारी संगठनको हस्तक्षेप बढी भयो । ०७२ मा नै टुंगिनुपर्ने काम ०७३ मा पनि सकिने लक्षण छैन । यो सरकार र प्रशासनको परिपक्वताको लक्षण होइन ।
साँच्चै हो, सरकार र प्रशासनले भूइँचालो पीडितहरुको घर पुनर्निर्माण र बसोबासको चुनौतिलाई सामान्य मानेको छ । तर, यो समस्या सामान्य होइन । प्रधानमन्त्री ओली असारभित्र सबै भूइँचालो पीडितको टाउकामा छाना लगाउने कुरा गर्छन् । छाना त छाप्रो वा अहिलेको प्रचलित शब्दमा कटेजमा पनि लगाएको हुन्छ । छानो लगाएर मात्र कुनै पनि घरले आकार पाउँदैन । नेपाली गाउँमा घरको आफ्नै परिभाषा छ । घरमा ती सबै सुविधा, गोठ, अंगेना, करेसा र कटेरो, बुइँगल, हुनै पर्दछ । त्यति भएन भने किसानको जीवन चल्दैन । सरकारले पुनर्निर्माणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने आगामी वर्षभित्र नेपाल छाप्राहरुको देश बन्नेछ ।
निश्चय पनि, नेपाल अहिले समयको चेपमा चेपिएको छ नराम्रोसँग । एकातिर नाकाबन्दीले बजार र व्यापार खस्किएको छ भने अर्कातिर भूइँचालोले उत्पादनशील भूमिको ग्रामीण अर्थ व्यवस्थालाई चकनाचुर पारेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जनताले सरकारसँग भरोसा खोजेका छन् । तर, सरकारका लागि भूइँचालो स्मृति स्तम्भ खडा गर्ने र मैनवत्ती जलाउने अवसर बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना हरेक भाषण मार्फत नयाँ र कल्पनाशील योजना तरंगित गर्दछन् । आफ्ना आँखा अगाडि थुपि्रएका विनास र निर्माणका चुनौतिको सामना गर्न सक्दैनन् । सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरुको गठवन्धनभित्रै तानातानीको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले गठवन्धन वाहिरका दलहरुको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउने त सोच्न पनि सकिँदैन ।
आन्दोलनरतः मधेसी दलहरुप्रति प्रम ओलीको पूर्वाग्रह सरकारको अर्को कमजोरी हो । मधेसी दलहरु फेरि आन्दोलनमा आउलान् वा नआउलान् । तर, उनीहरुको सहयोगविना पुनर्निर्माणको काम सहज हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकार अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशबाट भडकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै कुरागर्ने हो भने उनी संगतिमा छैनन् । भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रका कांग्रेस सांसदहरुलाई भेट्दा उनी पुलकित भएर एमाले र कांग्रेस मिलेमात्रै देशमा नवर्निर्माण हुने बताउँछन् । कुनै अर्को अवसरमा सरकारका असफलताको दोष प्रमुख प्रतिपक्षको टाउकोमा थुपारी दिन्छन् । उनको व्यवहार सार्वभौम जनताका प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो छैन । राजनीतिमा भलै उनको वर्चस्व होला । अहिलेको समयमा त्यस्तो वर्चस्वको खासै अर्थ छैन ।